भारतीय कलाकारलाई जनताले कसरी पत्याए, को-को भए निर्वाचनमा विजयी ? – Jaljala Online
Posted on May 24, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
जेठ १०, काठमाडौं । भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका बलिउडका केही चर्चित कलाकारहरु विजय भए भने कोही पराजय भएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहानै तेजिलो घाम, के अस्वभाविक नै हो त ?
साउन १३, काठमाडौं । शिक्षक पदमराज जोशी सधैजस्तो कलेज पढाउन बिहानै निस्के, अचानक उनको आँखामा असजिलोपना महसुस गरे। बिहानको घाम हेर्न उनलाई गाह्रो भयो। आँखा बिजाएजस्तो चिलाएजस्तो भयो। बिहानै नुहाएकोले चिसोले वा बाटोको धुलोले पनि होला भन्ने लाग्यो उनलाई। तर जब बाटोमा उनले साथीलाई भेटेर सोधे, उसले पनि त्यही समस्या बतायो। जोशीका साथीले त्यही भने, […]
Posted on August 19, 2019 August 19, 2019 Author Jaljala Online
भदौ २, काठमाडौं । यो खबर हामीले नेपालखबरबाट लिएका हौ । प्रहरीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरण अनुसन्धानका लागि ३० साउन २०७६ मा काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएकी अस्मिता कार्की र ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका संवाददाता युवराज कँडेलसँग बयान लिएको छ। पत्रकार पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा चितवन प्रहरीले रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्व अदालतबाट म्याद लिएर आत्महत्याका दुरुत्साहन अभियोगमा अनुसन्धान […]
Posted on July 6, 2019 Author Jaljala Online
असार २१, काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि कानूनको उल्लङ्घन गर्ने तथा नियमपालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरी सक्रिय भएको छ । भद्रकाली मन्दिरतर्फबाट सिंहदरबार पश्चिम मुलद्वार पृथ्वीनारायण शाहको सालिक हुँदै राम शाहपथतर्फ मोडिने सवारी चालकले सडक अनुशासन(लेन) उल्लङ्घन गरेमा जरीवाना गर्ने कार्यलाई प्रहरीले तीव्र तुल्याएको हो । सिंहदरबारको मुलढोकामै सवारी […]